Momba anay - Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd.
Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2010, Bontai dia manana ny orinasany manokana izay miompana amin'ny fivarotana, ny fampandrosoana ary ny famokarana karazana fitaovana diamondra. Manana fitaovana fikosoham-bary sy fikosoham-bary isan-karazany izahay ho an'ny rafitra poloney gorodona, ao anatin'izany ny kiraro fikosoham-bary diamondra, kodiaran'ny kaopy diamondra, kapila fikosoham-bary ary fitaovana PCD. Azo ampiharina amin'ny fikosoham-bary isan-karazany, terrazzo, gorodona vato ary gorodona fanorenana hafa.
Ekipa tsy miankina amin'ny tetikasa
Araka ny aseho amin'ny sary, dia tetikasa ao amin'ny orinasa mpanamboatra kodiarana Nanjing izy io, izay manana velarantany 130.000m². Tsy vitan'ny hoe afaka manome fitaovana avo lenta ihany i BonTai, fa afaka manao ny fanavaozana ara-teknika ihany koa mba hamahana ny olana rehetra rehefa mitoto sy manosotra amin'ny gorodona isan-karazany.
Fahaizana fampandrosoana matanjaka
BonTai R&D foibe, voafaritra amin'ny fikosoham-bary sy ny poloney teknolojia, ny lehiben'ny injeniera lehibe indrindra amin'ny "China Super Hard Materials" rehefa 1996, nitarika tamin'ny diamondra fitaovana manam-pahaizana vondrona
Ekipa serivisy matihanina
Miaraka amin'ny fahalalana vokatra matihanina sy rafitra serivisy tsara ao amin'ny ekipa BonTai, tsy vitan'ny hoe mamaha ny vokatra tsara sy mahasoa indrindra ho anao izahay, fa mamaha ny olana ara-teknika ho anao ihany koa. Aza misalasala mifandray aminay.
TONTOLON'NY CONCRETE LAS VEGAS 2019
Ny orinasanay dia fantatra amin'ny kalitaony ambony ary miavaka amin'ny faharetana tsara, ny fahamarinan-toerana ary ny manjelanjelatra avo lenta amin'ny fitaovana fikosoham-bary diamondra "BTD" sy ny pucks famolahana diamondra, izay ekena betsaka amin'ny tsena anatiny sy any ivelany. Aondrana any Eoropa Atsinanana sy Andrefana, Amerika, Aostralia, Azia ary Moyen Orient ary tsena eran-tany.
Mifikitra hatrany amin'ny filozofian'ny fandraharahana momba ny "vokatra tsara, fikosoham-bary, ary serivisy serivisy lalina". Miantehitra amin'ny fanasokajiana vokatra marim-pototra, kalitaon'ny vokatra marin-toerana, fitantanana mahomby ary serivisy mpanjifa tena tsara, dia neken'ny vondrom-piarahamonina mpanjifa izany.
Mitohy hatrany ny famenoana ny fangatahan'ny mpanjifantsika, ny vokatra isan-karazany, manatsara ny lanjan'ny vokatra, ary mamorona lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifantsika. Miezaha ho mpamatsy fitaovana diamondra tsara indrindra eran-tany.